Ịzụta pyridoxal phosphate ntụ ntụ (54-47-7) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / R & D mmeghachi omume / Pyridoxal phosphate
SKU: 54-47-7. Category: R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Pyridoxal phosphate ntụ ntụ (54-47-7), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Pyridoxal phosphate ntụ ntụ, ma ọ bụ nke a maara dị ka PLP, pyridoxal-5'-phosphate ma ọ bụ P5P, bụ ụdị ọrụ ma ọ bụ coenzyme nke vitamin B-6. P5P nwere ihe atọ dị na organic - pyridoxal, pyridoxamine na pyridoxine. Ahụ gị chọrọ P5P maka ọrụ dịgasị iche iche gụnyere ọganihu mgbochi na mmezi, ọrụ ntanetransmitter na ike metabolism.
Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) isi agwa
aha: Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P)
Molekụla Formula: C8H10NO6P
Ọbara arọ: 247.14
Melt Point: 139 ka 142 Celsius C
Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) okirikiri
Aha aha: Pyridoxal-phosphate
Aha njirimara: PLP, pyridoxal-5'-phosphate or P5P
Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) Usage
Pyridoxal-5-Phosphate, ma ọ bụ P5P dịka a na-amakarị, bụ ụdị ọrụ vitamin B6. N'ihe oriri ma ọ bụ ihe mgbakwunye, vitamin B6 dị na ụdị atọ: pyridoxine hydrochloride, pyridoxal, ma ọ bụ pyridoxamine. N'ime ahụ, ụdị B6 a ga-agbanwe site na imeju na ụdị ọrụ dị mkpa - P5P. Ọnụ ọgụgụ dị ala nke ntọghata site na arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụsi ọrụ ike nke vitamin B6 ka a kọọrọ, karịsịa ndị nwere ọrịa imeju ume, ọrịa Celiac, okenye, na ụmụ nwere autism. Site n'iji vitamin B6 na ụdị P5P nọ n'ọrụ, ntughari adịghịzi mkpa, uru zuru ezu dịkwa ozugbo ozugbo absorption.
Kedu ihe bụ pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P)
Dị ka "Vitamin B6 Therapy: The Nature's Healing," P5P nwere ike inye aka belata ihe mgbaàmà nke seborrheic dermatitis, syndrome, syndrome, autism na ụfọdụ ụdị anaemia. Ụdị P5P a tụrụ aro dịgasị iche dabere na ụkọ ma ọ bụ ọnọdụ ahụ ike ịchọrọ ịgwọ 2.5 mg na 50 mg kwa ụbọchị. Otú ọ dị, ị ga-ekwurịrị onye ọkachamara na-ahụ maka ahụike tupu ị gaa mgbakwunye ahụ ike - gụnyere P5P.
Kedu Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) na-arụ ọrụ
N'ime ahụ gị, P5P na-arụ ọrụ dị mkpa na amino acid metabolism, nkwenye biosynthesis, neurotransmitter biosynthesis, ngwakọta collagen na glucocorticoid edinam. Tụkwasị na nke a, P5P na-enyere gị aka ịhazi ọkwa sodium na potassium site na ịchịkwa ọrụ eletrik nke akwara gị, obi na akwara mgbu. Naanị na enzymes ndị ọzọ, P5P na-enyere ahụ gị aka ịkwalite na ịkụda amino asịd ma gbanwee amino acids site na ibe ya. Ọzọkwa, P5P na-eme ka ntọhapụ nke ike echekwara na imeju na akwara ma mee ka mmepụta ọgwụ na ọbara ọbara uhie mepụta.
Uru nke Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P)
P5P na Ọgba Ọkpụkpụ
Dị ka "Vitamin B6 Therapy: Ọdịdị nke ọdịdị ọdịdị nke ọdịdị," nke Jọn Ellis dere, P5P nwere ikike ịdakwasị ọkwa nke ahụ gị homocysteine. N'ime ahụ gị, amino acid homocysteine ​​adịghị enweta site na nri, ma site na amino acid ọzọ a na-akpọ "methionine." Homocysteine ​​bụ ihe nwere ike ibute ọrịa ọrịa obi, na P5P nwere ike belata mita methionine n'ime ahụ gị, na-eme ka mmepụta oke homocysteine . Tụkwasị na nke a, P5P nwere ike inyere aka chebe ahụ gị pụọ na obi obi, ọbara mgbali elu na ọrịa ọrịa vascular.
P5P na ọrịa cancer
Dị ka "Cecil Medicine: Expert Consult," Ọpụpụ P5P nwere ike inye aka na pancreatic na ọrịa cancer. N'ọtụtụ ọnọdụ, ụmụ nwanyị na-arịa cancer cancer na-enweghị vitamin B-6. Banyere ọrịa cancer pancreatic, otu nnyocha e bipụtara na "Journal of the National Cancer Institute" kwubiri na ọnụọgụ 26 nke ọrịa cancer pancreatic nke a na-amụ nwere ike ịbụ na enweghi ike igbochi ya na P5P supplementation tupu ya ebute ọrịa cancer pancreatic. Ndị nchọpụta adịghị ebipụta data ọhụrụ ndị metụtara nchọpụta ndị a.
Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) nyocha
Onye ọ bụla anụla banyere vitamin B6 na ole na ole ga-enwe ike ịgwa gị na vitamin B nwere ọtụtụ nyocha banyere ume na usoro ụjọ. Vitamin B6 dị oke egwu maka ndụ n'onwe ya. Inwe nsogbu dị ala nke nri a nwere ike ibute ọrịa akpụkpọ ahụ, ịda mbà n'obi, dizziness, isi ọwụwa, na nsogbu ndị ọzọ siri ike, dịka mgbu obi na strok. Ma o nwere ike ijuanya ịchọta na vitamin B6 bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mma na-agwọ ọrịa niile. Ma, ọ bụghị mgbe niile dị mfe ịnweta nri. Ndi ama ọfiọk ke ndinam okpokoro nri, kefriza, canning, ịchekwa ma ọ bụ nhazi ihe oriri nwere ike imebi ọdịnaya vitamin B6 dị ka 50%? Ị makwaara na ụfọdụ ndị enweghị ike iji ụdị ụfọdụ nke vitamin B6 mee ihe n'ụzọ dị irè? Enwere ụdị vitamin B6 pụrụ iche, nke na ahụ gị nwere ike iji pyridoxal-5-phosphate, ma ọ bụ P5P maka mkpụmkpụ. Ụdị a nwere ihe ngwọta dị egwu. M na-atụ aro ya mgbe niile maka ndị na-arịa ọrịa mgbu, ụkwụ ọkụ (ọrịa na-arịa ọrịa shuga), ọrịa ọgbụgba carpal, PMS, na edema (nchịkwa mmiri), n'etiti ọnọdụ ndị ọzọ. Nsonaazụ ndị a dị ịrịba ama. N'okwu a nke Terry Talks Nutrition, anyị ga-enyocha ụfọdụ ọnọdụ ndị nwere ike irite uru site n'ụdị ọrụ - P5P - nke vitamin B6, yana onye na-egwupụta ihe ọṅụṅụ nke nwere ike ịmetụta ahụ ike gị, ma ọ bụ ọbụna gbochie ịwa ahụ ụfọdụ!
Otu esi azụta Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) site na AASraw
Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) Ezi ntụziaka